Aghụghọ iji gbanyụọ bọtịnụ Windows 8.1 | Akụkọ akụrụngwa
Windows 8.1 gbanwere ụdị n'ụzọ ole na ole mgbe emechara mmelite izizi ya; ekele ya, ha abanyela a bukwanu ego nke ọhụrụ atụmatụ na interface nke a sistemụ, ịbụ n'etiti ha, bọtịnụ ahụ Gbanyụọ na isi anyị nwere ike ịchọta ya n'akụkụ aka nri elu nke Ihuenyo mbu.
Ugbu a, mmadụ nwere ike ịnwale iwepụ mbụ mmelite a nke Windows 8.1 ihe mere bọtịnụ a ji pụọ n'anya, ihe na-adighi adaba ime ọbụlagodi mgbe enwere usoro maka ya. Ọ bụrụ na ịga n'ihu n'ọrụ a, ị gaghị enwe ike ịnweta mmelite ndị ọzọ, dịka Microsoft na-ekwu na akụkọ dị iche iche. N'isiokwu a anyị ga-ekwupụta ụzọ abụọ kwesịrị ekwesị ị nwere ike iji wee mee ka bọtịnụ Shutdown adịghịzi ebe anyị kpọtụrụ aha n'elu.
1 Iji ndekọ aha ndekọ iji gbanyụọ ọrụ a na Windows 8.1
2 Gbanyụọ bọtịnụ Shutdown na ngwa ndị ọzọ
Iji ndekọ aha ndekọ iji gbanyụọ ọrụ a na Windows 8.1
Ọ bụ ezie na anyị anaghị ekerịta echiche nke gbanyụọ bọtịnụ a iji mechie Windows 8.1, ma na ntanetị differentntanetị dị iche iche a rịọrịrị ụdị enyemaka a n'ihi na ọrụ dị ugbu a mgbe anyị na-eji Win + X site na gburugburu ebe ọ bụla anyị hụrụ onwe anyị.
Ọ bụrụ na nke a bụ mkpa gị na ihe achọrọ anyị wee kwado ka ị soro usoro ndị a iji mezuo ebumnuche a:
Anyị na-aga n'ebe Ụlọ Windows 8.1
Anyị na-eji ụzọ mkpirisi keyboard Nweta + R
Na oghere nke windo ọhụrụ anyị na-ede: regedit.exe
Window nke Onye ndebanye aha.
Anyị na-aga n'ụzọ ọzọ.
Ozugbo anyị ruru, anyị pịa bọtịnụ nri dị na mpaghara n'aka nri.
Anyị mepụtara igodo DWORD ọhụrụ (32-bit) nwere aha Launcher_ShowPowerButtonOnStartScreen na anyị ekenye uru nke 0.
Anyị na-anabata windo niile ma mechie ha.
Site na usoro a anyị kwuru, anyị nwere igodo ohuru na ndekọ aha ndekọ aha nke ga-edegharị sistemụ arụmọrụ anyị nke mere na mgbachi bọtịnụ. Naanị ihe anyị kwesịrị ime maka mgbanwe a ga-agbanwe bụ ịmalitegharị sistemụ arụmọrụ anyị. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-aga Start Screen (ọ bụrụ na ị wụlitere na Desktọpụ) na voila, ị ga-enwe ike ịmasị na bọtịnụ a bara uru adịlarị aka nri.
Gbanyụọ bọtịnụ Shutdown na ngwa ndị ọzọ
Ọ bụ eziokwu na usoro ahụ a kpọtụrụ aha n’elu nwere ike ịdị irè, enwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị mmadụ ha abụghị ndị ọkachamara na-ejikwa aha ndekọ aha na usoro nke ha; ijikwa nke ọ bụla n'ime ha nwere ike ịgụnye arụmọrụ na-ejighị n'aka nke Windows 8.1, ebe ọ bụ nke a dị mkpa ka ị rụọ Ndabere nke sistemụ arụmọrụ ọ bụrụ na ihe agahie.
Ọ bụrụ na ịmaghị ụzọ ziri ezi iji mee nnomi ndabere nke sistemụ na ndegharị ọhụrụ a nke sistemụ arụmọrụ Microsoft, anyị kwadoro na Lelee isiokwu nke anyị ji mee ihe banyere esemokwu a na Diski Images.
Ugbu a, ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka usoro niile anyị kpọtụrụ aha dị mfe, mgbe ahụ ị nwere ike iji ngwa ndị ọzọ. Otu, nke nwere aha nke ModernUI Tuner, ị nwere ike budata na njikọ na-esonụ.
ModernUI tuner raara onwe ya nye ọrụ ole na ole ndị ọzọ ị nwere ike nyochaa n'oge ọzọ, ebe ọ bụ na ugbu a, anyị bụ naanị maka ọrụ iji otu n'ime ọrụ ya, nke ga-enyere anyị aka gbanyụọ bọtịnụ Shutdown na Windows 8.1; Enwere ike ibugharị ngwa a, yabụ anyị ga-anwa ịchọta ya ebe na draịvụ ike anyị ka ehichapụ ya na mberede.
Ozugbo anyị gburu ya naanị anyị ga-aga na taabụ ikpeazụ (Start Screen), ebe anyị ga-agbanyụ igbe nke naanị nhọrọ dị ebe ahụ. Mgbe anyị tinyechara ngbanwe ndị ahụ (ọ nwere ike ịdị mkpa ịme kọmputa ahụ) anyị ga-enwe ike ịchọpụta na bọtịnụ mgbachi a agakwaghị anọ ebe anyị nọbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Otu esi zoo bọtịnụ Ike na Windows 8.1
Otu esi anwale Firefox 29 na-ewepụghị ụdị nke ugbu a